Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda Garoonka Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa lagu guuleystay in dib loo furo duulimaadkii gudaha dalka, kaasoo saakay hakad galay kadib markii Shirkadaha diyaaradaha ay shaqo joojin sameeyeen.
Shaqo joojinta ayaa timid kadib markii hay'adda NISA ay soo saartey go'aan ay uga mamnuucayso mid kamida shirkadaha inay duulimaad diyaaradeed ku sameyso magaaladda Doolow, ee gobolka Gedo, iyadoo aan sababta la sheegin.
Boqolaal qof oo ku xiyirmay Garoonka ayaa saacadihii dambe ka duulay Muqdisho, waxaana wararku ay sheegayaan in waaxda duuliska Garoonka ay isku dayayso inay NISA ku qanciso go'aankeeda inay dib uga laabato.
Dad badan ayaa is waydiinaya sababta NISA ay uga taliso Garoon diyaaradeed, iyadoo shaqadeedu tahay Sirdoonka, waxaana jira eedeymo loo eediyay Fahad Yaasiin, oo ah inuu yahay shaqsi meel walba oo xarumaha dowladda kamid ah isaga laga amar qaato.
0 Comments Topics: fahad yaasiin garoonka diyaaradaha nisa